ZOMA 17 JANOARY 2020
FIHAONANA TAMIN’NY FILOHA RAJOELINA : Hanohana an’i Madagasikara ireo mpandraharaha Frantsay
Noraisin’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha omaly maraina ireo delegasiona avy amin’ny Medef na ny fivondronan’ireo mpandraharaha Frantsay. 8 octobre 2019
Izy ireo izay misehatra manokana amin’ny lafiny famoronana asa, ny fandraharahana ary ny fampiroboroboana maharitra. Ny volana mey lasa teo, raha tsiahivina dia nisy ny fivoahana ara-pomba ofisialy nataon’ny Filoha tany Parisy Frantsa. Tamin’io no nihaonany mivantana tamin’ny Filoha frantasy Emmanuel Macron ary nihaonany tamin’ireo mpikambana ao anatin’ny Medef. Tamin’izany no efa nitondra ny fahavononany amin’ny fanohanana an’i Madagasikara hirosoana mankany amin’ny fampandrosoana tena izy ireto farany. Tohin’ny fihaonana teo amin’ny roa tonta, araka izany ity notontosaina tamin’ny omaly ity.
Niompanan’ny dinika hatrany ny fifanohanana sy ny fanamafisam-piaraha-miasa. Naroson’ny Filoha tamin’ireto mpandraharaha Frantsay ireto tamin’ny antsipiriany ireo vinam-pampandrosoana izay hotanterahina eto Madagasikara hanarenana ny firenena. Isany apetraky ny fitondram-panjakana ho laharam-pahamehana ao anatin’izany ny fampandrosoana ara- toe-karena. Vonona hatrany ny Medef ny hanohana an’i Madagasikara amin’ny alalan’ny fampiasam-bolan’izy ireo eto an-toerana. Tamin’ny taona 2005 no efa niantomboka ny fifanakalozana teo amin’i Madagasikara sy ny fivondronamben’ireo mpandraharaha frantsay.
Hatreto dia orinasa lehibe miisa 30 mpikambana ao amin’ny Medef no efa mampiasa vola eto Madagasikara. Amin’izao fitondrana mijoro ara-dalàna izao dia vao mainka manana antoka ireo mpampiasa vola vahiny fa tony sy milamina ny raharaham-pirenena, araka ny fanazavana noentin’ny filohan’ny delegasiona izay nihaona tamin’ny Filoha. Fantatra fa tena anisany hiandraiketan’ireto orinasa vahiny ireto ny fananganana fotodrafitrasa mahakasika ny fanadiovana sy ny fidiovana, fanabeazana ary ny lafiny nomerika. Lavitr’ezaka ny tanjon’ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta. Vokatra mivaingana ary mipaka mivantana amin’ny fiainam-bahoaka no tanjona apetraka ao anatin’izany. Ankilany ny fitondram-panjakana ihany koa dia naneho fahavanonana tanteraka hiara-hiasa amin’izy ireo ho tombotosoan’ny vahoaka Malagasy.
Maty tsy tra-drano ilay tovolahy nitondra “moto” LOZAM-PIFAMOIVOIZANA (152) 14 janvier 2020 Lehilahy milaza mahatafiditra mpiasa ao amin’ny « Finance » nosamborina FISOLOKIANA AVO LENTA (121) 14 janvier 2020 Vehivavy novonoim-badiny dia naleviny tao an-tanin-davanila SOANIERANA-IVONGO (96) 13 janvier 2020 Maty momoka ary tsy nisy vokany ny fitakian’ny Tim FAMBOLENA KORONTANA (90) 15 janvier 2020 Trano sy tanànan’olona ahiana harodan’ny lavaka nangadiana fasika LOZA MITATAO (78) 14 janvier 2020 Nitsidika ny Minisiteran’ny Serasera sy kolontsaina ROVA MANJAKAMIADANA (69) 13 janvier 2020